I-Papudo Laguna Apartment, i-50 yeemitha ukusuka elunxwemeni - I-Airbnb
I-Papudo Laguna Apartment, i-50 yeemitha ukusuka elunxwemeni
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguAldo
I-Apartment ebekwe kumgangatho we-7, i-Albatros tower (i-1st Line), i-Papudo Laguna Condominium. Zixhotyiselwe abantu aba-5 (itawuli kunye nenkonzo yamaphepha eneendleko ezongezelelweyo), amagumbi okulala ama-2 kunye namagumbi okuhlambela ayi-2, ithala elinomtsalane olwandle kunye nembonakalo ye-papudo, engaphantsi kweemitha ezingama-50 ukusuka elunxwemeni kunye nechibi ekunokuhamba kulo ngaphakathi kwekhondom. Indawo yokupaka ekhethekileyo enofikelelo olulawulwayo iiyure ezingama-24 ngosuku.
(Izilwanyana zasekhaya zalo naluphi na uhlobo azivumelekanga, ngaphandle kokukhetha)
Imbono yalo yolwandle kunye ne-papudo inika indawo ekhethekileyo yokuphumla. Indawo ye-condominium inelungelo, ivumela ukufikelela kwiinkonzo zorhwebo kunye nokukhawuleza ngokukhawuleza ngaphandle kwesidingo sezithuthi.
4.53 · Izimvo eziyi-55
I-condominium ine-lagoon ehambayo, i-kayaking iyafumaneka (ugcino lwangaphambili), amachibi okuqubha. Iimitha ezingama-50 ukusuka ekuphumeni ukuya eLwandle kunye nokuhamba ngonxweme. ikuvumela ukuba uhambe uye kwiindawo zokutyela kunye neendawo zokuzonwabisa.
sigcina unxibelelwano olusisigxina kunye neendwendwe zethu kwaye sithathele ingqalelo kuwo nawuphi na umcimbi malunga nokuhlala kwazo